ဧရာဝတီ| September 5, 2012 | Hits:3,940
| | အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆီ သွားရာလမ်းသည် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မျှ စိတ်ကူးယဉ်သလို မဖြစ်ဘဲ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုများ၊ ခါးသီးသော အမှန်တရားများနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ရမြဲဖြစ်သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> DR. THET LWIN September 5, 2012 - 5:03 pm	တို တို ဘဲ—-နောက် ပြန် မ လှဲ. နို င် ဘူး—–ခက် မယ်–ကြာ မယ်–ရှေ့ ဆက် မယ်–။ နှေး တဲ. အ ခါ နှေး မယ်–မြန် တဲ့ အခါ မြန် မယ်—–ဥ ပ မာ– နီး နီး စပ် စပ် -ထိုင်း–ပုံ စံ နဲ. တူ မယ်–။ စ စ် တပ် ၀င် အုပ် ချု ပ် ရင် လဲ–ခ ဏ ပေါ့ ။ ဒီ မို ကေ၇ စီ စ နစ် က တော့ အ မြဲ ရှ င် နေ မယ်–။ ဈေး ကွ က် ဆက် ရှင် နေ ရင် ရ ပြီ–။ တံ ခါး မ ပိတ် ရင် ရ ပြီ–။ ဒါ ကြောင့်– WE ARE –ON THE HIGH-WAY–လို.-တင် နေ တာ ပါ–။ ( ခိုင် လုံ တဲ့ အ ကြောင်း ရှိ တယ်)–ပြော ပြ ခွင့် မ ရှိ ပါ–။
Reply	mgoogyaw September 6, 2012 - 6:47 pm	I appreciate your article. You have learn,and wise enough, to think,greatly.You know the World is in 2012,yet,the majority of Burmese,are left behind,and still their mind is in 1960′s.How much are we,develop?How much do we earn?How did the native people of the host countries treated to Burmese?Have we forgotten about the bitterness of Junta’s ruling,from 1962 till now? Have we forgotten about the General’s Wealthiness and our people poverty? Can we totally stand on our own feet? Do we”Burmese” came from ,one of the Empire,to become proud for nothing? Did we know that “no man is an island”?